အဆိုပါ SANOVO TraystackerSX20 သည် အသေးစား/အလတ်စား ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ရန် တီထွင်ထားသော ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
မွေးမြူရေးခြံများတွင် နေရာအကန့်အသတ်ရှိသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသောကြောင့် SX20 ကို 30x ကြက်ဥဗန်းများစုထားသောနေရာလွတ်သက်သာသည့်ဖြေရှင်းချက်အဖြစ် ဒီဇိုင်းထုတ်ပါသည်။ ergonomic ဒီဇိုင်းအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများကိုလည်း ပံ့ပိုးပေးပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို တိုးတက်စေသည်။
ထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အပိုအလိုအလျောက်စနစ်က ဗူးခွံအပြည့်ထည့်ခြင်းကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ကြက်အိမ်များမှ ဝင်လာသောဥများကို အော်ပရေတာအား အာရုံစိုက်စေပါသည်။ အားလုံးကို သက်သာသောစျေးနှုန်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
SX20 တွင် တပ်ဆင်နိုင်ပါသည်။ SANOVO Farmpacker 4070 နှင့် 24000. ၎င်းသည် ဘုံပလပ်စတစ်ဗူးများစွာကို ကိုင်တွယ်နိုင်သည်။ SANOVO GI-OVO မှရောင်းချသော EggsCargosystem® ကို အကြံပြုပါသည်။
နေရာလွတ်သက်သာခြင်း - ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ ခြေရာခံခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်ထားသော stacking၊ ergonomic ဒီဇိုင်းသည် အော်ပရေတာ၏ အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်။
သက်သာသော - အလွှာ 16.000 မှ 30.000+ ရှိသော လယ်ယာများအတွက် ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသော ရွေးချယ်မှု
အရည်အသွေး အာမခံချက် - အလိုအလျောက် ပေါင်းစည်းခြင်းသည် သင့်အား အဝင်ဥစီးဆင်းမှုအပေါ် အာရုံစိုက်နိုင်စေပါသည်။
နှင့် SANOVO Traystacker SX20 သည် သင့်လယ်ယာထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်းကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ မင်းမှာ ရှိပြီးသားလား။ Farmpacker 4070 သို့မဟုတ် 24,000? မိုက်တယ်!
ဤနေရာတွင် SX20 သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို သင်တွေ့နိုင်ပါသည်။ Farmpacker 40 Farmpacker 24000 နှင့်
SANOVO Farmpacker 40 နှင့် SX20
SANOVO Farmpacker 24000 နှင့် SX20